नेपालमा कोरोना भाइरसको खोप कहिलेसम्म आउला ? पहिले कस्ता व्यक्तिलाई खोप दिइनेछ ? - The Public Today
१३ मंसिर २०७७, शनिबार १०:३१
एजेन्सी : कोरोनाभाइरसको खोप विश्वबजारमा उपलब्ध हुने बितिक्कै नेपालमा ल्याउने गरी प्रक्रिया थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
खोप ल्याउनका लागि खोप बनिरहेका देशमा कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले बताए।
“जुनजुन देशमा खोप बनिरहेको छ ती सबै देशलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ,” उनले भने।
नेपालले सहुलियतमा जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत अर्थात्, ६० लाख डोज चाहिने बताएको र त्यसको जवाफमा ‘उपलब्ध गराउने’ भनेर करिब डेढ महिनाअगाडि नै प्रतिबद्धता सहितको जवाफ आइसकेको उनले बताए।
जनसङ्ख्याको करिब ३ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका अग्रमोर्चामा काम गर्ने पर्छन्।
त्यसबाहेक ५५ वर्ष उमेर कटेका १७ प्रतिशत अर्थात् ५१ लाख रहेका छन्।
“कोभ्याक्सले खोप उपलब्ध गराएपछि पहिलो प्राथमिकतामा यो ६० लाख जनसङ्ख्या पर्छ,” प्रवक्ता डाक्टर गौतमले भने।
“पहिला त खोप नै बनिसकेको छैन। बनिसकेपछि पनि हामीलाई कहाँको सँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, कति खर्चिलो हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन र भण्डारणको पक्ष हेरेर ल्याउँदा मार्च वा एप्रिल होला कि भन्ने छ,” प्रवक्ता गौतमले भने।
पाटन अस्पतालमा कार्यरत तथा औषधि विज्ञानबारे अनुसन्धान गर्दै आएका चिकित्सक बुद्ध बस्नेत भन्छन्, “चीनले एक/दुई दिनमै खोपको पछिल्लो विवरण दिन्छ होला। मलाई चाहिँ त्यो खोप र अक्सफर्डले बनाएको र भारतको सीरम इन्स्टिट्यूटले धेरै अगाडि उत्पादन थालेको खोप नेपाललाई ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ।”